Tsika uye dhizaini yePopayán | Absolut Kufamba
maruuzen | | Updated on 18/06/2021 00:18 | Korombiya
Latin America ine inoshamisa nzvimbo uye Korombiya inotarisa zvimwe zvezvakanakisa. Semuyenzaniso, Popayan, rimwe remaguta ekaresa uye akachengetedzwa zvakanyanya mucolonial America. Iyo ine yakakosha kwazvo yekuvaka uye yetsika nhaka.
Iyo nhoroondo yePopayán ichakushamisa iwe, asi zvakare iguta rine yakanakisa, dzakasiyana uye inonaka chikafu, saka tinogona kuti kana ukangoishanyira, inokusiya uine ndangariro dzakanakisa. Nhasi, kuAbsolut Viajes, iyo hupfumi hwetsika uye dhizaini yePopayán ...
2 Popayán, iro guta jena
3 Getaways kubva kuPopayán
Iri guta reColombia iri mubazi reCauca, pakati peWestern neCentral Cordillera, kumadokero kwenyika. Ndiyo kudengenyeka kwenyika zvikuru uye guta rakatambura kudengenyeka kwepasi kwakawanda saka kune basa rekuchengetedza zvachose zvachose panhaka huru yekuvaka.
Rwizi rweCauca runoyambuka uye rwunofarira a pane mamiriro ekunze akadzikama kunyange hazvo, nhasi, semamwe mativi epasi akakanganiswa nekushanduka kwemamiriro ekunze, ine nguva dzekupisa zuva rezhizha
Nhoroondo yePopayán haitangi nekoloni, hongu. Ane prehispanic nhoroondo chii chaakasiyira piramidhi kuvakwa, nzira nemakuva. VaSpanish vakatanga Popayán muna Ndira 1537, mukutsvaga kweEl Dorado. Adelantado Belalcázar akazviita, mumwechete iyeye akatanga Quito naSantiago de Cali mukutsvaga kwake hupfumi.
Kubva ipapo guta, kunyangwe rakaramba riine zita raro rechizvarwa, raizoshandurwa rikave guta rakajairwa nekoloni raitevedza maSpanish ekumisikidza. Izvo zvakazove nevabatsiri, makanzuru, mameya, chechi ...
Kunyangwe veSpanish vaizounza mbeu nemombe kunyika idzi, chokwadi ndechekuti nenguva isipi zvese zvakatenderedza ndarama uye kushandiswa kwayo. Nekudaro, Popayán yakave imwe yeiyo akakosha uye akapfuma maguta eViceroyalty yeNew Granada. Ndarama uye kutengeswa kwevaranda ndizvo zvaikosha kuupfumi hweguta.
Pane imwe nguva, Popayán akakwikwidza nemamwe akakosha emaguta emakoloni akadai seCagagena kana Bogotá. Hupfumi hwemhuri dzemuno dzakatungamira kudzimba chaidzo kuri kuvakwa uye zvakare kudyarwa muhunyanzvi hwezvinamato zvemarudzi ese. Zvese izvi zvinoumba hutsika uye hunyanzvi hwekuvaka hwanhasi.
Popayán, iro guta jena
Izvi ndozvazvinozivikanwa, Popayán, guta jena. Ichokwadi ndechekuti chakakwanisa kuchengetedza, kunyangwe nguva, kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nekudengenyeka kwenyika, mazhinji ezvivakwa zvekare. Yake ngowani yenhoroondo Iyo yakanaka: ine dzimba dzemamorori, migwagwa ine cobbled, patio nemaruva, tembere dzakadzikama uye zvese akapenda chena chando Icho chinenge chichiita chisina kuchena. Muenzaniso wakanaka weAmerican colonial maitiro.
Popayan ingori maawa matatu chete kubva kuCali kuenda nemotokari uye saka iri imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi. Chekutanga zvinhu kutanga: nzvimbo yayo yenhoroondo, yakanakira kuongorora netsoka kuti iwe ugone kukoshesa iyo yakanaka mavakirwo ezana ramakore rechi XNUMX, XNUMX neXNUMX. Heino iyo Caldas Park, moyo weguta kwawakabva. Iri munzvimbo dzakapoteredzwa nezvivakwa zvakanaka zvekoloni ...
Kubva muzana ramakore rechiXNUMX ndiyo yakanaka wachi shongwe, inozivikanwawo se "mhino dzaPopayán." Iyo wachi inogadzirwa nendarira uye icho chidimbu chakaunzwa chete kubva kuLondon. Kune zvakare iyo Humilladero Bridge, kubva iko kuona kweguta kuri kukuru, uko panguva imwe chete kunobatanidza pakati nepamaguta ekuchamhembe. Iyo yakareba 240 metres uye inoratidza mucherechedzo wekutanga weguta.
Yakavakwa pakati pezana ramakore reXNUMXth uye nhasi chiratidzo, ingori nhanho kubva padanda guru. Zviri pedyo ne Bhiriji reKuchengeta, bhiriji rakanaka rematombo rakavakwa muna 1713 kubvumira vapirisita kuyambuka rwizi Molino.
Kufamba uchaona zvakawanda mafi, mashopu nemaresitorendi uyezve, temberi dzechitendero. Iyo Chechi yesan francisco Iyo tembere hombe yekoloni uye yakanaka kwazvo. Iwe unogona kuita kushanya negwara, kuti udzidze zvakawanda nezvechivakwa. Mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika muna 1983, bhokisi rakapunzika rikaratidza mitumbi mitanhatu. Nhasi kwasara vaviri chete uye havagone kuonekwa nguva dzese, asi nerwendo unogona kuita rombo rakanaka. Kukona kwekona kune imwe chechi uye saka iwe uchaona yakawanda yakawanda.
Somuenzaniso, chechi yekare kwazvo muguta iri kubva muna 1546 uye inozivikanwa seLa Ermita. Iri pakati peEl Morro nedhorobha uye haisi iyo yakanyanya kunaka pane zvese asi ine maonero akanaka edenga remacolonial macolon uye mafrescoes akare akanaka.
Ehezve, guta rekare-zana rine mamuseum. Iyo Guillermo Valencia Museum Inoshanda mune inoyevedza imba yezana ramakore rechiXNUMX uye ine mifananidzo, fenicha uye mifananidzo yakare yaive yemuridzi wayo, mudetembi wemuno.
Imwe miziyamu ndiyo Mosquera Imba Museum, zvakare mune yemuzana ramakore rechiXNUMX raimbove musha waGeneral Tomas Cipriano de Mosquera, purezidhendi weColombia kanokwana kuita muzana ramakore rechiXNUMX. Uye ivo vanoti pamadziro pane urn nemoyo wake ...
El Archdiocesan Museum yeChitendero Art Inosanganisira kupenda, zvifananidzo, sirivheri, maaritari, nehunyanzvi hwechitendero, zvese zviri zvezana ramakore rechi XNUMX kusvika XNUMX Kune zvakare iyo Museum of Natural Nhoroondo, muminda yeyunivhesiti, iyo miziyamu yakanakisa yerudzi rwayo muColombia.
Ichokwadi ndechekuti Popayán iguta rekutsvaga netsoka, pasina kukurumidza uye nezviuru zvinomira. Nhanho dzako dzinokutora kubva pano uchienda uko, pakati penzvimbo dzekugara, patio ine chiuru chemaruva, machena machira uye maresitorendi kubva uko kunoshamisa hwema kunobuda. Nekudaro, uchitenderera, iwe unosvika panoramic nzvimbo yeguta uko chifananidzo cheiye muvambi, Sebastián de Belalcázar, chakaiswa zvine mutsindo pamusoro peiyo yaive piramidhi rekare, iro Iyo Morro de Tulcán.
Kana iwe uine zuva rakajeka uye rakajeka, iwe uchave unokwanisa kuona kunyangwe kupfuura Guta Rekare rePopayán uye unokoshesa makomo akanaka anochimbundikira. Zvinotora mweya nehafu kukwira kumusoro kuno, asi haugone kuenda usina kuona zvese kubva kunzvimbo ino yepamusoro yakakwira kumusoro.
Sezvatakambotaura pakutanga, guta rinopawo imwe yeakanyanya gastronomies muColombia saka haugone kuenda usina kuedza madhiri avo. Iyo inonyanya kufarirwa dhishi yemuno ndeye Tray paisa, nemupunga, mazai akaomeswa, goridhe yenguruve, mabhanana nemaavocado. Kunofadza! Uye zvechokwadi, zvekare arepas havasi kushaiwa kana.
Nzvimbo yakanaka yekudyira ndiLa Fresca, chitoro chidiki chiri mamaira mashoma kubva pachivara chikuru uye ndechimwe chekare uye chinonyanya kuzivikanwa. Izvo hazvitaure zvakawanda pakutanga kuaona, asi mapipi avo empanaditas chinonaka (chakazara nembatatisi ine zvinonhuwira nzungu muto).
Getaways kubva kuPopayán
Kana chinangwa chako chiri chekugara rinopfuura zuva rimwe muPopayán saka kune kumwe kushanya kwaungaite. Semuenzaniso, unogona kusvika San Agustín uye uzive yayo pre-Columbian saiti iyo inodzivirirwa neiyo UNESCO
Kune zvakare iyo Purace National Park, iyo yakakura kwazvo mudunhu iri. Ine volcano ine chando chisingaperi pamusoro, inopa paki zita rayo, uye kana uchida kukwira kana kufamba musango iyi ndiyo nzvimbo yakanakisa. Zvikasadaro, iwe unogona zvakare kuenda nebhazi mumugwagwa usina tara asi uchinakidzwa nemaonero akanaka, uine matsime anopisa, mhute uye mapopoma. Uye nerombo rakanaka, iwe uchaona condor kubva kuAndes.
Awa imwe kubva kuPopayán iri Silvia, guta diki remakomo ane mukurumbira nekuti svondo rega rega kune indigenous musika. Kusarudzwa kuri neChipiri. Zuva iro vanhu veGuambiano vanosvika vachibva kumamisha uye vanochengeterwa kuzotengesa nekutenga zvigadzirwa. Iwe unogona zvakare kusaina kweiyo shoma jipi rwendo kuenda kumamisha mamwe chetewo, kuti uvazive ivo kana kudya kwemasikati papurazi.
Iwe unofarira matsime anopisa here? Ipapo unogona kuenda ku Kokonuco Thermal Baths, nhanho imwe kubva kuPopayán. Iine madziva maviri akasiyana, anofashaira mvura uye anodziya mvura, uye kana wanga uchikwira iyo Purace saka izvi zvinogona kunge zviri magumo akanakisa emuviri wako nepfungwa.
Citiestsika nemagariroEnda kunzvimbo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika uye dhizaini yePopayán
fabian lara oña akadaro
Akanaka mapurani ayo anofanirwa kuve nemunyori senge ingangove yese yeEcuador, zvingave zvakanaka kutsvaga vanyori vayo kuti vangangorondedzera vagadziri uye vavaki venguva idzodzo, kuti vanyatso kumisikidza chimiro (baroque?) Kana zvirinani eclectic yemhando dzakasiyana dzevhavha peji. Chero zvazvingava kwaziso dzangu nemakorokoto.
Pindura kuna fabian lara oña
Panamanian doris akadaro
Mangwanani akanaka, rakanaka sei guta rePopayan, ndiri kutsvaga VaYimi Gonzalez, kana Mai Luz Dary kana VaAlfonso ndivo vabereki vekurera vaYimi uye vanobva kuguta reBuenaventura vakamirira amai vake Dolores Medina Ndokumbira utaure nefoni dzinotevera 316-3299895 kana 314-8498161 kana 310-3279514 ndinokutendai zvikuru.
Pindura kuna doris panamanian